Tenga Immunoglobulin G (IgG) Vagadziri - Phcoker Chemical
Kuva nemagunoglobulin mashoma muropa rako kunokupa mukana wakakura wekutapukirwa. Kuva nezvakawanda zvakagona ……….
Immunoglobulin G (IgG) vhidhiyo
ruvara Off-chena kune Yero Powder
Skukodzera 100% mvura inonyungudika
APane Chinwiwa, Hutano hwevanhu hweMurume, Zvepabonde zveVarume zvinokanganisa kuwedzera, Hutano chikafu, chikafu chinowedzera, nezvimwe.
Maantibodies mapuroteni anogadzirwa nemasero emuviri kuti arwisane nemabhakitiriya, mavairasi uye zvimwe zvinokuvadza.
Kuve nema immunoglobulins mashoma muropa rako kunokupa mukana wakakura wekutapukirwa. Kuva nezvakawandisa kunogona kureva kuti une allergies kana yakanyanya kudzivirira immune system.
Immunoglobulins inosunga, kucherechedza, uye kuparadza mabhakitiriya, muchetura, hutachiona uye humwe hutachiona. Muviri unogadzira ma antibodies kurwisa maantigenist. Zvino, inotevera nguva kana antigen ichipinda mumuviri, inomutsa kugadzirwa kwemasoja anodzivirirwa mumuviri.
Kukosha kwemamunoglobulins kunokosha kuti unzwisise kuti nei bovine colostrum supplementation ingave yakakomba kuhutano hwevanhu. Immunoglobulins uye zvimwe zvinoshanda zvemuviri immune mu bovine colostrum yakaratidzirwa kubatsira kubatsira kuderedza njodzi ye autoimmune, hutachiona, uye idiopathic (isingazivikanwi chikonzero) mamiriro, anosanganisira: Kuku pox, Hepatitis, Measles.
Raw, nyowani bovine colostrum ine mhando dzinoverengeka dzakasiyana dzeemunoglobulins: IgA, IgG, IgM, IgE, IgD
immunoglobulin g (IgG): Inoshandiswa kugadzirisa zvinetso zvemuviri immune uye kutapukira. Bovine colostrum ine zvakawanda zveGG kupfuura chero imwe immunoglobulin.
Maantibodies ndiwo akakosha ekudzivirira hutachiona. IgG ndiyo mhando hombe yeanorwisa ropa inowanikwa muropa uye yekunze maseru fluid, ichiitendera kudzora hutachiona hwemuviri munyama. Nekusunga mhando zhinji dzehutachiona senge hutachiona, mabhakitiriya, uye fungi, IgG inodzivirira muviri kubva kuhutachiona. Masoja ekudzivirira chirwere aya anokudzivirira kubva kuhutachiona neku "kurangarira" utachiona hwawakambosangana nahwo.
Iwo akajairika IgG, serum IgG mazinga kazhinji asingasviki mazana maviri mg / dL, uye IgM uye IgA mazinga ari pasi pe200 mg / dL. Reripheral ropa CD20 + B-masero kuverenga anowanzoita asingasviki 19%.
IgG ndiyo yega immunoglobulin yemunhu kuti ipfuure kubva kuna amai kuenda mudumbu kuti isatidzire hutachiona.
Ndezvipi zviratidzo zvekushaikwa kweIgG?
Vanhu vane kushomekana kweIgG vanokwanisa kutapukirwa noutachiona. IgG kushomeka kunogona kuitika chero pazera.
Kuongororwa kweropa kunoyera mwero wemunoglobulin ndiyo nhanho yekutanga pakuongorora kushomeka kweIgG. Mimwe miedzo yakaoma asi yakakosha inosanganisira kuyerwa kwematanho ekudzivirira chirwere mukupindura mamwe majekiseni.
Zvirwere zvinowanzo bata vanhu vane IgG kushomeka ndeizvi:
Sinus kutapukira uye kumwe kutapukira kuzvirwere
Hutachiona hunoguma nekurwadza kwehuro
Kashoma, kwakakomba uye kunotyisidzira hutachiona
Mune vamwe vanhu, hutachiona hunokonzera kukuvara kunokuvadza mweya uye kushanda kwemapapu. Izvi zvinogona kukanganisa kufema. Vanhu vane IgG kushomeka zvakare vanowanzoona kuti pneumonia uye iyo furufuru yekudzivirira haidzivise kuwana hutachiona uhu.
IgG Powder inobatsira
IgG Powder ndeye yakanatswa, isina mukaka sosi ye immunoglobulin G (IgG) inowanikwa seyakawedzerwa chekudya. Iyi yakachena IgG formula inobatsira kuchengetedza hutano hwemuviri hutachiona hwekuchengetedza hutachiona nekusunga huwandu hwakawanda hwehutachiona uye chepfu mukati megut lumen.
IgG poda inopa isina-Allergenic Concentrate Immunoglobulins Ekukwiridzira Mucosal Immunity
IgG poda inobatsira Kuchengeta Microbial Balance
IgG poda inotsigira GI Barrier Hutano uye Kuvimbika
IgG poda inobatsira Ramba Wakajairwa Nekukanganisa Balance
IgG upfu batsira muyero weumwe uye chengetedza hutano hwekudzivirira.
IgG upfu kubatsira kurwisa Mabhakitiriya: Immunoglobulins inogona kubatsira kudzikisa njodzi inokonzerwa nehutachiona hunokuvadza, nokudaro ichidzivirira kana kudzikisira zvimwe zvinhu zvehutano.
IgG poda tizvishandise uye kushandiswa
Nepo immunoglobulin supplements isiri yakajairika chikamu pamusika, pane zvimwe zvigadzirwa zvinokwikwidza. Maonero emusika weiyo immunoglobulin supplementation anotaridzika zvakanaka.
Tsvagurudzo yakaratidza kuti lgG inogona kushanda mukukanganisa hutachiona hwunowanikwa mumudumbu turakiti. Colostrum haingobatanidze huwandu hwakawanda hwe lgG, asiwo zvinhu zvakati zvinogona kubatsira kudzivirira kwemuviri.
IgG poda inowedzera yakasimudzira immunoglobulins kusimudzira mucosal immune, kusimudzira yakajairika gut kugadzirisa matanho uye kubatsira kuchengetedza utachiona.
IgG uye Fcγ Receptors muIntestinal Immunity uye Mukudzivirira Tomas Castro-Dopico, Menna R. Clatential Front Immunol. 2019
Huturu zvirema zvinogona kukonzera chaiyo, T cell-inotsamira, autoanti-IgG antibody kugadzirwa mumakonzo J Exp Med. 1985 Jan 1
Kinetics yeakananga immunoglobulins M, E, A, uye G mune inobereka, yepakati, uye yechipiri cytomegalovirus utachiona hunodzidziswa nehutachiona-hunobata enzyme-inosanganiswa immunosorbent assay. SL Nielsen, I Sørensen, HK Andersen J Clin Microbiol. 1988 Apr; 26 (4): 654-661.
Mhedzisiro yeVatatu Colostrum Vanodya paPassive Transfer yeIsaviriro uye Kuzeya Hutano muCholero pane California Dairy inotevera Colostrum Management TrainingDeniece R. Williams, Patrick Pithua, Angel Garcia, John Champagne, Deborah M. Haines, Sharif S. Aly Vet Med Int. 2014; 2014: 698741
Kuongororwa kwemhedzisiro yechiedza che Ultraviolet mwenje pamabhakitiriya akasvibiswa akaiswa mukati mawo mukaka uye colostrum, uye pane colostrum immunoglobulin G V. Pereira, ML Bicalho, VS Machado, S. Lima, AG Teixeira, LD Warnick, RC Bicalho J Dairy Sci. Author manuscript; inowanikwa mu PMC 2015 M